विद्यालयका नाममा नर्क, प्रिन्सिपलबाटै ८ देखि ११ वर्षीया बालिकाहरुमाथि यौन दुर्व्यवहार – Sanjal Nepal
Homeसमाचारविद्यालयका नाममा नर्क, प्रिन्सिपलबाटै ८ देखि ११ वर्षीया बालिकाहरुमाथि यौन दुर्व्यवहार
विद्यालयका नाममा नर्क, प्रिन्सिपलबाटै ८ देखि ११ वर्षीया बालिकाहरुमाथि यौन दुर्व्यवहार
November 28, 2020 admin समाचार 1163
भिडियो समाचारको अन्तिमा राखिएको छ पुरा समाचार हेर्नुहोस खलङ्गा, १२ मङ्सिर ः पछिल्लो समय जुम्लाका किसान ओखरखेतीप्रति आकर्षित हँुदै गएका छन् । चन्दननाथ नगरपालिका–८ का कालीबहादुर भण्डारीले ओखरखेतीबाट मनग्ये आम्दानी हुने जानकारी दिन्ुभयो ।
तिला गाउँपालिका–१ का रमा बुढा आफूहरु व्यावसायिकरुपमा ओखरखेतीमा लागेको र आयआर्जन समेत वृद्धि गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय सरकारले किसानका लागि राहत हुने गरी काम गर्नुपर्र्छ र अनुदानको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।” आगामी वर्ष ओखर बेचेर रु दुई लाखसम्म कमाउन सक्ने गरी बगँैचा व्यवस्थापनमा जुटेको हरिकला रोकायाले जानकारी दिनुभयो । शुरुको चरणमा हुुर्काउन दुःख हुने गरेको छ । पछि हुर्केपछि ओखरमा खासै दुःख नहुने यहाँका किसानले बताउँछन् ।
कम मेहनतमा बढी आयआर्जनमा सहयोग पुग्ने खेती ओखर भएको किसानको अनुभव रहेको छ । खरिद गर्न व्यापारी गाउँमै आउने गरेको छन् । यहाँका आठवटै स्थानीय तहमा यसको खेती हुँदै आएको छ । एकै बोटमा रु पाँच हजारसम्मको ओखर फल्ने गरेको उनीहरुको भनाइ रहेको छ ।
अहिले खलङ्गा बजारका विभिन्न चोकमा ओखर बेच्ने किसानको भीडभाड हुने गरेको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख बालकराम देवकोटाले ओखरखेती गर्नेको सङ्ख्या जिल्लामा बढेको जानकारी दिनुभयो । कार्यालयका अनुुसार जिल्लामा १९० हेक्टरमा ओखरखेती हुने गरेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “एक वर्षमा १५ टनसम्म ओखर फल्ने गरेको छ । अधिकांश किसानले ओखर कोसेली घरमा पुगेर प्याकेजिङ गरेर बिक्री गर्ने गरेको छन् ।” बजारमा अहिले ओखरको मूल्य प्रतिदाना रु १० का दरले बिक्री हुने गरेको धिताल अर्गानी पसलका सञ्चालन टीकाराज धितालले जानकारी दिनुभयो । जिल्लामा ओखर भण्डारण गर्न समस्या नभएकले किसानको आकर्षण बढ्दो क्रममा रहेको छ । ओखरखेती किसानका लागि राम्रो आम्दानीको स्रोत बनेको छ । यसका लागि हावापानी निकै अनुकूल रहेको छ ।काठमाडाँै, पोखरा, नेपालगञ्ज र सुर्खेतलगायतका अर्गानिक पसलमा यहाँको ओखर खपत हुने गरेको छ । मागअनुसार यहाँका किसानले सहजै पु¥याउन नसकेको बताइएको छ । तीन रोपनी जग्गा एकै कलष्टरमा भएका किसानको समूह बनाएर बिरुवा, काँटछाट, रोगकिरा, सिँचाइका क्रियाकलाप उपलब्ध गरेकोे कार्यालयले जनाएको छ ।
ओखर बेचेर जिल्लामा करोडभन्दा बढी भित्र्याउने गरेका कोसेली घरका सञ्चालक गोविन्द आचार्यले जानकारी दिनुभयो । यहाँ आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको एकमात्र रोजाइ ओखर हुने गरेको छ । (रासस)
महान श्रीमान विनोदलाई लन्डनबाट आयो सहयोग, यति धेरै परिवर्तन आयो अनितामा ( भिडियो हेर्नुहोस्)
November 2, 2020 admin समाचार 5733
December 28, 2020 admin समाचार 852
December 10, 2020 admin समाचार 4673
हिजो एकजना गाउँकै दाइले फेसबुकमा म्यासेज गर्नुभयो | “हेई शिवानी, फ्रेन्ड रिक्वेष्ट पठाएको छु, किन एसेप्ट नगरेको ? लेख्नु भएको रहेछ। कसैको मित्रताको अनुरोध स्वीकार गर्ने नगर्ने मेरो खुसीको कुरा हो| मलाइ ठिक लागे गर्छु
LEX 18 agenda conversation: Job club (402717)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (377393)
Hello world! (313166)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (287983)
Technology Training Company Coding Dojo to Open Boise Campus at Trailhead (104832)